Waa maxay buundada credit aad u baahan tahay si aad u kiraysato baabuur? - Wareega Hantida
Bogga ugu weyn Waa maxay buundada credit aad u baahan tahay si aad u kiraysato baabuur?
Waa maxay buundada credit aad u baahan tahay si aad u kiraysato baabuur?
Isha sawirka: motorbiscuit.com
Iibsashada baabuur cusub waa maalgashi muhiim ah, waana inaad si taxadar leh u miisaamaysaa fursadahaaga. Laakin, haddii doorashada baabuurka ay tahay mid aad u adag, go'aaminta in la kireeyo ama la iibsado waxaa laga yaabaa inay ka sii dhib badanaato.
Ku bilow inaad barato dhibcaha ugu yar ee loo baahan yahay si aad baabuur u kiraysato oo aad uga fikirto inay tani tahay doorashada ugu fiican adiga.
Intaa waxa dheer, ka hor inta aanad gaadhiga kirada ah ku wada bixin, waa in aad marka hore buuxisaa codsiga oo aad ogolaato heshiiskaaga. Waxay u badan tahay inay aqbalaan codsigaaga ijaarka haddii aad leedahay taariikh credit oo heer sare ah.
Waa kuwan dhowr qodob oo aad u baahan tahay si aad heshiiskaas meesha uga saarto:
Waa maxay kirada baabuur?
Waa maxay dhibcaha dhibcaha aad u baahan tahay si aad baabuur u kiraysato?
Maxaad qabataa ka hor intaadan wax soo iibsan?
Waa maxay shuruudaha kiraynta baabuurka?
Maxaad sameyn kartaa haddii aadan lahayn taariikh deyn?
Waa maxay sababta buundada credit wanaagsan inta badan loogu baahan yahay si loo kireeyo baabuur?
Maxaa la ogaadaa ka hor intaanad gaadhi kirayn.
Goorma ayay macno samaynaysaa kiraynta baabuur?
Waa maxay Kirada Baabuurka?
Ijaarsi ijaarsi ijaarramee jira. Waxaad ogolaatay inaad ula dhaqanto baabuurka sidii kaaga muddo dheer kadib markaad saxiixdo heshiis. Si ka duwan gadashada gaadhiga, kiraysigu waa ballanqaad muddo gaaban ah.
Haa, ilaali gaadhigaaga kirada ah oo ka hortag in uu aad u dhoco iyo jeexjeexo, laakiin baabuurku ma aha kaaga. Ma horumarin doontid sinnaanta baabuurka lacagahaaga, laakiin mas'uul kama noqon doontid mustaqbalkiisa mustaqbalka fog sidoo kale. Dabcan, waxaa jira ka dhaafid haddii aad tahay qofka waxyeellada geystay.
Kiraynta baabuur waxay u muuqataa doorasho wanaagsan oo dusha sare ah. Marka heshiiskaagu dhamaado, waxaad ku dhex wadi kartaa baabuur cusub oo qof kale oo aad dib ugu soo celisay iyada oo aan wax shuruud ah lagu xidhin.
Laakin markaa waa inaad lacag ku bixisaa mudnaanta, iyo sidoo kale inaad sameyso lacag-bixino badan haddii aadan haysan buundooyin credit wanaagsan.
Baadhid: Waa maxay buundada credit aad u baahan tahay si aad u iibsato baabuur 2022?
Dhibcaha deynta dhabta ah ee loo baahan yahay si loogu kireeyo baabuurka way ku kala duwan tahay wax iibinta ilaa kuwa wax iibiya, sida uu qabo NerdWallet.
Inta badan ganacsiyadu waxay u baahan yihiin dhibco ugu yar oo ah 620. Badi dukaamada baabuurtu waxay ku xisaabtamaan dhibcaha u dhexeeya 620 iyo 679 inay u dhow yihiin heer aad u wanaagsan, iyo dhibcaha u dhexeeya 680 iyo 739 inay ku fiican yihiin.
Waxay u badan tahay inaad hesho dalabyo kiro soo jiidasho leh haddii buundada buundooyinkaagu ka sarreeyo 680. Haddii buundadaadu ka hooseyso 660, in kastoo, waxaad weli haysataa 22% fursad ah in lagu aqbalo.
Hubi Sidoo Kale: Waa maxay dhibcaha dhibcaha aad u baahan tahay si aad guri u iibsatid 2022
Maxaad Samaysaa Kahor Intaadan Dukaamaysiga Tagin?
Samee kuwan soo socda ka hor intaadan wax soo iibsan:
Iska yaree dheelitirka kaararka deynta
Bixi biilasha waqtigeeda
Akoonka deymaha ha furnaado
Ka hubi warbixinnada deynta khaladaadka
1. Dhiso dhibcahaaga
Haddii aad ka welwelsan tahay in buundada credit-kaagu ay kaa horjoogsan karto inaad hesho heshiiska aad rabto, ka shaqee sidii aad u horumarin lahayd.
2. Yaree dheelitirka kaararka deynta
Hoos u dhigista biilasha kaadhka deynta waa mid ka mid ah xeeladaha ugu dhaqsaha badan ee lagu hagaajinayo dhibcahaaga deynta. Inta suurtogalka ah, iska bixi biilasha kaadhka deynta.
Hadhaaga kaarka deynta oo weyn ayaa laga yaabaa inay saameyn xun ku yeelato dhibcaha deyntaada.
Marka loo eego Nerd Wallet, hadhaaga wax ka yar 30% ee xadka deynta ayaa kaa caawin kara inaad hesho lacag soo jiidasho leh.
3. Bixi biilasha wakhtiga
Halyeyga Amaahda Ardaygu waxa uu kugula talinayaa in aad dhammaan biilashaada ku bixiso wakhtigeeda, dhib ma leh.
Bixi biilasha kaadhka deynta, biilasha tamarta, biilasha telefoonka, iyo biilasha kale wakhtiga loogu talagalay si aad u muujiso inaad masuul ka tahay dhaqaale ahaan.
Lacagaha lagu bixiyo waqtigii loogu talagalay ayaa saameyn faa'iido leh ku leh dhibcaha deyntaada.
4. Hayso Xisaabaadka Daynta Furan
Ilaa aad haysato sabab xiiso leh oo aad u xidhayso mooyaane, dhammaan akoonnada deymahaaga ha furnaado.
Hal sabab oo aad u xidhi karto koontada deynta ayaa ah inaadan awoodin kharashka sannadlaha ah. Haddii kale, koontooyinkan ha sii firfircoonaadaan sababtoo ah koontada dheer ee furan, way sii fiicnaan doontaa waxay saameyn doontaa dhibcahaaga deynta.
5. Hubi warbixinnada deymaha ee khaladaadka
Waxaa suurtogal ah inay jiraan khaladaad ku jira warbixintaada deynta.
La soco taariikhda deymahaaga oo is barbar dhig macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed iyo macluumaadka ku jira warbixintaada deynta si aad u hubiso in wax walba ay sax yihiin.
Waa maxay Shuruudaha Kirada Baabuurka?
Waxa laga yaabaa inay u baahdaan buundooyin kredit oo wanaagsan si loogu oggolaado heshiiska kirada baabuur. Dhibcaha 680 ama ka badan waxay u badan tahay inay kaa caawiyaan inaad hesho ogolaanshaha ijaarka.
Dhibcaha heerkan ka hooseeya waxay kaa dhigi kartaa habka codsiga mid kugu adag.
Si loo helo faham wanaagsan oo ku saabsan taariikhda deynta baabuurkaaga, amaah-bixiyeyaal badan ayaa eega tirakoobka dhibcaha credit ee si gaar ah ugu xiran deymaha baabuurta.
Maxaa dhacaya haddii aad leedahay buundada buundada ee ka hooseeya 680?
Lacago badan marka la saxiixo
Awood la'aanta kiraynta
Kiraynta baabuur la isticmaalay
1. Lacagaha Sare ee Saxiixa
Xitaa haddii dhibcaha dhibcaha ay ka hooseeyaan 680, waxaa laga yaabaa inay weli kuu oggolaadaan heshiis kiro. Waxa laga yaabaa, si kastaba ha ahaatee, inay kaa dalbadaan inaad wax badan bixiso wakhtiga saxeexa.
Waxa kale oo laga yaabaa inay kaa dalbadaan inaad kordhiso qaybo bille ah oo u dhexeeya $10 ilaa $125.
2. Awood la'aanta Kiraynta
Waxa kale oo ay u badan tahay in haddii dhibcaha dhibcaha ay ka hooseeyaan 680, ay kuu diidi doonaan heshiis kiro. Waa inaad sidoo kale haysataa qorshe kayd ah haddii buundada creditku hooseeyo.
3. Kiraynta Gaadhi La Isticmaalay
Shakhsiyaadka leh credit credit, kiraysashada baabuur la isticmaalay waa beddelka. Haddii aad dalbato heshiis baabuur oo la isticmaalay, waxaa laga yaabaa inaad waqti ku fududaato in lagu aqbalo.
Maxaad Samayn Kartaa Haddi Aad Aan Lahayn Taariikhda Daynta?
Marka loo eego Balance-ka, amaah-bixiyeyaashu ma haystaan ​​hab ay ku ogaadaan haddii aad dhaqaale ahaan mas'uul ka tahay dhibcaha dhibcaha, taas oo ku gelin karta dhibaato badan.
La tasho xubin qoyska ka tirsan.
Hababka aan caadiga ahayn
Wada baayacmushtar adigoo si taxadar leh u soo dukaameysanaya.
1. La tasho xubin qoyska ka tirsan
Si lagaaga caawiyo inaad dhisato credit, la saxeexe ayaa saxeexa heshiiskaaga. Saxeexiyahaaga wuu dhibi doonaa haddii aadan wax lacag ah bixin.
Xusuusnow tan oo raadso saaxiib ama xubin qoyskaaga ah oo kula qaadan kara fursad.
Waa inaad sidoo kale raadisaa qaraabo leh buundooyin credit wanaagsan. Saxeexayaasha leh buundooyinka kredit hoose kuma caawin karaan
2. Hababka aan caadiga ahayn
Waxa jira doorashooyin kale oo lagu heli karo heshiis kiro. Experian, tusaale ahaan, waxa uu sheeganayaa in wax kala beddelasho kiro ah ay suurtagal tahay. Marka ay hal qof kugu wareejiyaan heshiis kiro, waxay tan u garanayaan wareejinta ijaarka.
3. Wada gorgortan Adigoo si taxadar leh wax u iibsanaya
Marka ganacsigu uu haysto baabuur wakhti dheer, waxa laga yaabaa inay quustaan.
Rajo la'aantu waxay horseedi kartaa heshiis ijaareed. Sababtoo ah ganacsatadu waxay isu diyaarinayaan soo-bandhiga moodooyinka sanadka cusub, dhamaadka sanadka inta badan waa wakhtiga ugu weyn ee la heli karo gorgortan kiro.
Hubi in ganacsigu gorgortan doono iyo in kale, xataa haddii aad u malaynayso inaad heshay heshiiska kiraynta ugu weyn. Waxaad isku dayi kartaa inaad ka gorgortanto lacag bixin yar oo bille ah ama wakhti ijaar oo ku habboon baahiyahaaga.
Waa maxay sababta buundada buundada wanaagsan inta badan loogu baahan yahay heshiis ijaar?
Marka meheradda kiraysigu ay baarto codsigaga, waxay raadiyaan calaamado muujinaya inaad tahay amaahiye la aamini karo.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee ay eegaan waa dhibcaha deyntaada. Sababtoo ah buundada buundada sare waxay ka dhigan tahay lacag-bixinnada waqtiga, ka faa'iidaysiga deymaha ugu yar, iyo shuruudo kale oo soo jeedinaya qiimaynta sarraysa, way sii fiicnaanaysaa credit-kaaga, waxay hoos u dhigtaa khatarta aad keenayso.
Ma aha oo kaliya in deyntaadu ay go'aamin doonto inay ku ogol yihiin heshiiska kirada, laakiin waxay sidoo kale saameyn doontaa heerka dulsaarka aad bixin doonto. Lacag bixintaada bishiiba way ka sii jabnaan doontaa haddii buundada deymahaagu kuu qalmo dulsaar hoose.
Qiyaasta qiima dhaca baabuurka iyo heerka ribadaadu waxay saameeyaan lacagaha ijaarka ah ee billaha ah.
Amaah-bixiyeyaashu waxay ka jaraan qiimaha hadhaaga la saadaaliyay ee baabuurka qiimaha iibka si ay u xisaabiyaan qiimo dhaca (sidoo kale loo yaqaan amortization). Qiimaha haraagu waa qiyaasta lagu qiyaasay qiimaha baabuurka dhamaadka muddada heshiiskaaga. Farqiga u dhexeeya qiimaha iibka iyo qiimaha hadhaaga ayaa ah maamulaha ijaarka.
Markaa, haddii aad baabuur ku kiraysato saddex sano qiimo iib ah oo dhan $25,000 oo qiimihiisu yahay $18,000, maamulaha ijaarkaagu wuxuu noqonayaa $7,000, oo la bixiyo 36 bilood.
Waxay ku dari doonaan heerka dulsaarkaaga maamulaha, iyo, sida deynta baabuurta (ama nooc kasta oo kale oo maalgelin ah), waxay siin doonaan deyn-qaadayaasha leh qiimeyn credit wanaagsan, dulsaar ka jaban, iyo lidkeeda.
Inkasta oo lacagaha kiradu ay caadi ahaan ka hooseeyaan bixinta amaahda baabuurta-$100 ama ka badan mararka qaarkood, marka loo eego xogta khabiirka-boqolkiiba baabuurta cusub ee la kiraysto ayaa hoos u dhacday 2020. Q2 2019, waxay kireeyeen in ka badan 32% dhammaan baabuurta cusub, laakiin tiradaas ayaa hoos ugu dhacay 28% Q2 2020.
Amaahiyeyaasha aan asaasiga ahayn (oo leh buundada credit ee 601-660) waxay xisaabiyeen 8% dhammaan heshiisyada 2019, laakiin amaah-qaatayaasha aasaasiga ah waxay ku xisaabtameen ku dhawaad ​​​​8% dhammaan heshiisyada 2020. Marka laga reebo amaah-qaatayaasha hoose, heerarka bixinta ijaarka ayaa si yar u koray guud ahaan dhammaan fasallada amaahda (501-600 credit score).
Maxaa la Ogaa Kahor Kireynta Baabuurka
Marka aad gorgortan gasho, waxa laga yaabaa in aad ka gorgortanto heshiis ijaareed oo wanaagsan. Dabcan, kharashyada oo dhan maaha kuwo laga doodayo, sida qiimaha hadhay iyo kharashka iibka.
Si kastaba ha ahaatee, waxa aad kaydsan kartaa lacag adiga oo sameya tillaabooyinka soo socda:
Waa inaad xoogaa cilmi baaris ah ku sameyso gaariga aad rabto inaad kireysato.
Ogaanshaha qiimaha suuqa baabuurka ayaa kaa caawin doona inaad go'aamiso in dalabku yahay mid macquul ah iyo in kale.
Waa inaad is barbardhigtaa qiimayaasha dukaamo kala duwan.
Ka raadi iibiyeyaasha maxaliga ah ee onlayn si aad u aragto haddii ay jiraan kuwo ku siinaya xayaysiis khaas ah, lacag celin, ama qiimo dhimis kale oo baabuurta gaarka ah. Xitaa waxaad ka raadsan kartaa iibiyayaal magaalooyinka ama degmooyinka kuu dhow si aad u aragto haddii aad lacag kaydsan karto adigoo baabuur wax yar ka sii fogeynaya.
U dabacsanow nooca baabuurka.
Kiraynta baabuurta qaarkood aad bay uga qaalisan tahay kiraysashada kuwa kale. Celceliska qiimaha kirada bishii ee Honda Civic waa $291, halka Ford Explorer uu yahay $491, sida uu qabo Experian. Sababtoo ah kala duwanaanshaha qiimaha, waa fikrad wanaagsan in la eego noocyada baabuurta kala duwan si loo helo bixinta ugu fiican.
Ka gorgortamo khidmadaha
Haddi aad taqaano waxa ganacsiyada kale ay ku soo dalacayaan kirooyinka moodooyinka la midka ah kan aad eegayso, weyddii iibiyaha in uu u dhigmayo ama ugu yaraan qiimihiisu ku helo isla barxadda kubbadda cagta. Haddii aad qorsheyneyso inaad gadato baabuurka dhamaadka heshiiska, waxaad sidoo kale weydiin kartaa kordhinta xadkaaga masaafada sanadlaha ah ama hoos u dhigida heerka iibka.
Goorma ayay Macno samaynaysaa Kiraysashada Gaadhi?
Haddii aadan rabin inaad gasho deyn baabuur, ijaartu waxay noqon kartaa doorasho waqti gaaban ah oo soo jiidasho leh. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad soo celisaa baabuurka marka heshiisku dhamaado, halka bixinta deynta ay kuu ogolaanayso inaad si toos ah u iibsatid baabuurka.
Aynu eegno faa'iidooyinka iyo khasaaraha:
Suurtagalnimada wadista baabuur casri ah
Waxay u baahan yihiin lacag-bixin hoose oo ka hooseeya deynta baabuur.
Lacag-bixinuhu waa hooseeyaan bil kasta.
Sababtoo ah baabuurka waxay u badan tahay inuu ku hoos jiro dammaanad, waxaa jiri doona dayactir qiimo yar.
Ballanqaad waqti-gaaban (caadi ahaan 24 ilaa 36 bilood), ka dib waxaad kiraysan kartaa ama iibsan kartaa baabuur cusub.
Gaadhigu ma laha sinaan iyo lahaansho.
Xaddidyada masaafada (badanaa waxaad ku xaddidan tahay tiro mayl gaar ah sannad kasta)
Haddi ay wadar ahaan baabuurka wada bixiyaan ka hor inta aanu heshiisku dhicin, waxa laga yaabaa inay u baahdaan caymis faraqa.
Iibka iyo kiraynta labaduba waxay macno samayn karaan xaaladaha qaarkood. Haddii aad wadid baabuur cusub ay muhiim kuu tahay, oo aad rabto in aad u beddesho baabuur cusub dhowrkii sano ee la soo dhaafay, heshiis ijaarku wuxuu noqon karaa ikhtiyaarka ugu fiican adiga. Inkasta oo ay tahay inaad xisaabiso dayactirka iyo dayactirka dhacaya inta lagu jiro muddada heshiiska, kharashyada la dhimay ee bishiiba waxay fududayn karaan miisaaniyaddaada.
Qaadashada deynta baabuur si aad baabuur u iibsato waxay ku dhejinaysaa waddada si aad u dhamaystirto lahaanshaha, markaa marka ay bixiyaan deynta, gaadiidka adigaa iska leh inaad ku sameyso sidaad rabto. Ama waad haysan kartaa oo wadin kartaa sannado ama waxaad ku iibin kartaa lacag caddaan ah. Amaahda baabuurku ma xaddidayso mayl- sannadeedkaaga, markaa haddii aad masaafo dheer u safarto ama aad qaadato fasaxyo waddo oo la dheereeyey, iibsigu waxa uu noqon karaa doorasho ka wanaagsan.
Dhibcaha Dhibcaha Si aad Gaadhi ugu Kiraysato 2021
Caadi ahaan waxay u baahan yihiin dhibco 620 ah oo loogu talagalay heshiis kiraysi oo lala yeesho ganacsade la ixtiraamo. Inta badan ganacsatadu waxay u arkaan dhibcaha u dhexeeya 620 iyo 679 inay ku dhow yihiin ra'iisul, halka buundooyinka u dhexeeya 680 iyo 739 ay yihiin kuwa ugu muhiimsan.
Kiraysi Baabuur Oo Fudud Si Loogu Helo Dhibcaha
Inta badan baabuurta cusub ayaa diyaar u ah kireysiga. Si kastaba ha ahaatee, ma jiro heshiis baabuur oo "ka fudud" in la sugo marka loo eego mid kale.
Shuruudaha Kiraynta Dakhliga ee Kiraysiga Baabuurka
Amaah-bixiyeyaashu waxay u baahan yihiin dakhliga ugu yar ka hor intaysan u gudbin heerkan. Qadarka loo baahan yahay si aad ugu qalanto way kala duwan tahay deyn bixiye kasta, laakiin waa inaad sida caadiga ah kasbato ugu yaraan $1,500 ilaa $2,000 bishii ka hor cashuurta hal il keliya.
Su'aalaha Inta Badan La Is Weydiiyo (Su'aalo)
Waa maxay ijaarka?
Sida laga soo xigtay ilo-wareedka, heshiisku waa wax ku ool ah kirayn baabuur oo wakhti dheer ah. Heshiisyadu way ku kala duwan yihiin hal ganacsi ilaa kan xiga, laakiin inta badan, ganacsiyadu waxay ku amaahiyaan baabuur wakhti go'an waxayna u baahan yihiin inaad bixiso lacag-bixin bille ah wakhtigaas oo dhan.
Kiraynta Baabuurku ma waxay dhistaa credit?
Kiraynta baabuurka waxay kaa caawinaysaa inaad horumariso credit. Kireynta iyo gadashada baabuur waxay ku leeyihiin saameyn isku mid ah dhibcahaaga deynta. Ka sokow, kiraynta ama iibsashada baabuur waa faa'iido sababtoo ah waxay kala duwanaanaysaa taariikhda deyntaada. Isku darka credit waxay kaa caawin kartaa inaad horumariso dhibcahaaga deynta. Marka aad leedahay isku-darka amaahda, waxaad haysataa amaahda iyo kaararka deynta labadaba. Dhibcahaaga deynta ayaa laga yaabaa inay sare u kacdo haddii aad muujiso mas'uuliyadda maaliyadeed oo leh noocyo badan oo amaah ah. Bixinta kiradaada wakhtigeeda bil kasta waxay kaa caawin doontaa inaad horumariso dhibcahaaga deynta.
Ma u baahan tahay dhibco gaar ah si aad baabuur u kiraysato?
Haa Dhab ahaantii! Amaah bixiyayaasha intooda badani waxay u arkaan buundada deymahaaga inay aad u wanaagsan tahay haddii ay tahay 740 ama ka badan.
Haba yaraatee ma tahay inaad baabuur kiraysato?
Hubaal maaha! Dhab ahaantii, ka hor inta aanad saxiixin xariiqda dhibcaha leh, hubi in heshiisku ku habboon yahay miisaaniyaddaada.
Maxay tahay sababta qiimaha kirada baabuurku u kala duwan yahay?
Heerarka heshiisku way ku kala duwan yihiin shirkad kireeysi ilaa mid kale, iyo sidoo kale gobol ilaa kan xiga. Siciradu maalin walba way isbedelaan oo raacaan qaab la mid ah kuwa deymaha baabuurta cusub.
Ogow in hagaajinta buundada credit-kaaga ay tahay mid ka mid ah xeeladaha ugu waxtarka badan ee lagu dhimayo kharashka kiraynta baabuur.
Dhowr bixiyayaasha buundooyinka credit waxay bixiyaan buundooyinka kredit lacag la'aana waxayna ka warbixiyaan jeegaga si ay u arkaan halka aad u baahan karto caawimo.
Haddii aadan ku degdegin inaad gadato baabuur cusub, waxaa laga yaabaa inay ku haboon tahay inaad horumariso dhibcahaaga deynta.
Source source: https://www.motorbiscuit.com/wp-content/uploads/2021/08/credit-score-phone.jpg
Faallooyinka Maqalka ah ee 2022: Ma mudan tahay | Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka Maqalka
Waa maxay Kharashka Kaadhka Dareenka? Sida Loo Ogaado Oo Looga Waramayo Eedaymaha Been Abuurka ah
Sida Loo Bilaabo Ganacsi Connecticut sanadka 2022: Hagaha Ugu Dambeeya, Talaabo-Talaabo
Kuwa jeclaan lahaa inay ganacsi ka bilaabaan Connecticut, maqaalkani wuxuu si fiican kuugu hagi doonaa…
Daqiiqad 12 akhri
15 Xiddig -yaqaannada ugu Fiican Kolkata sannadka 2022 | Faallooyinka ugu Fiican
Kolkata, oo sidoo kale loo yaqaan Calcutta waa caasimadda gobolka Hindiya ee Galbeedka Bengal, oo ku taal…
10ka hantiile ee ugu mushaarka badan USA | Dawladaha Ugu Wanaagsan Hantiilayaasha
Ganacsiga dhulku maaha mid joogto ah oo haddii aad ka dhigto ishaada muhiimka ah ee…
Sida Loo Noqdo Sarkaalka Hawlaha Sare COO Of Business
In kasta oo qof kastaa uu jecel yahay fikradda ah noqoshada maamule, wax aad u yar ayaa diyaar u ah inay galaan shaqada.
Sida iyo halka laga helo dalabka lacagta
Haddii aad internetka ka raadiso "halka laga helo dalabka lacagta", waxa laga yaabaa inaad la kulanto...
16ka Meelood ee Adeegyada Taageerada Macmiilka ee ugu sarreeya sannadka 2022 -ka
Adeegga macaamiisha tayada leh waa qayb muhiim ah oo ka mid ah ganacsi kasta oo raba inuu cabbiro. Si kastaba ha ahaatee, si joogto ah u fulinaya tayada…
20-ka Shaqo ee Waqti-dhiman ee ugu Fiican ee Bixinta 2022
Waa maxay Nambarka Wadista oo halkeed ka heli kartaa?